थोरै खर्चमा घर चलाउन १० टिप्स : यसरी खर्च नियन्त्रण गरे घर धान्न सजिलो ! - IAUA
धन सम्पत्ति पैसा कमाउने तरिका मनोरञ्जन रोचक प्रसंग
ramkrishna December 8, 2017	थोरै खर्चमा घर चलाउन १० टिप्स : यसरी खर्च नियन्त्रण गरे घर धान्न सजिलो !
काठमाडौँ – पछिल्लो समय महंगी बढेको छ । महंगीको अनुपातमा कमाइ बढेको छैन । कम खर्चमा घर चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । तर यो बाध्यताका बीचपनि धेरैलाई कम खर्चमा घर धान्न निकै गाह्रो भइरहेको छ । यो नेपालीहरुको मात्र समस्या होइन, अन्तरास्ट्रिय स्तरमै कम खर्चमा घर चलाउनेहरु धेरै छन् । यो जताततैको समस्या हो । विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले पनि कम खर्चमा घर धान्न सकिने टिप्सहरुबारे लेखेका छन् । आखिर कम खर्चमा कसरी घर धान्न सकिन्छ त ? हेरौं १० टिप्स :
१०. रमाइलो गर्ने नाममा धेरै पैसा खर्च नगर्नुहोस् । धेरै रमाइलो गर्ने साथीको संगत छ भने पैसा चलाउन आफ्नी जीवनसाथीलाई दिनुहोस् । अविवाहितका हकमा आफ्नो परिवारको कम खर्च गर्ने साथीलाई पैसाको जिम्मा दिनुहोस् । यसो गर्दा आफुसंग केहि पैसा राख्न भने नबिर्सिनुहोस् ।universalkhabar.com
Previous Previous post: आफ्नो मोबाइलमा कहिल्यै सेभ नगर्नुस् यी कुराहरु
Next Next post: एउटै फार्मबाट दैनिक एक लाख ४० हजार अन्डा